လာမယ့်အပတ်ကချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ OLLIE နဲ့ GARETH တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်အထူးဖြစ်မှာပါ - သတင်း
လာမည့်အပတ်ကချယ်လ်ဆီးအတွက်လုပ် Ollie နှင့် Gareth ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဘို့အထူးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လိမ့်မည်
ဒါဟာလာမယ့်အပတ်ကချယ်လ်ဆီးအတွက် Made အတွက် Ollie Locke နှင့် Gareth Locke ၏မင်္ဂလာဆောင်ဖေါ်ပြခြင်း, အထူးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည် ချယ်လ်ဆီးအတွက်လုပ်: အဆိုပါမင်္ဂလာဆောင်သည်လက်ရှိစီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းကြေကွဲဖွယ်မြင်ကွင်းများတွင် Gareth Locke ကသူ၏မိခင်သည် Alzheimer နှင့် Covid-19 ရောဂါခံစားနေရသောစောင့်ရှောက်မှုခံနေရသောအိမ်တွင်ရှိပြီးမင်္ဂလာဆောင်သို့မလာနိုင်ခြင်းကြောင့်သူမထံမသွားနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိကန့်သတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပျက်လို့မရပါဘူးကြီးမားတဲ့အိပ်မက်မင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်ထားချင်ပါတယ်ဆိုပါတယ်ပါပြီ ဒါကြောင့်အစားသူတို့က ASAP နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါတို့အားလုံးအဲဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
Ollie ကတွစ်တာတွင်သတင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ လာမည့်တနင်္လာနေ့သည်ချယ်လ်ဆီးအတွက် Made In အထူးဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ ချယ်လ်ဆီးအတွက်လုပ် .. မင်္ဂလာဆောင် !! ငါတို့အားလုံးကိုအရာအားလုံးကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်။ ဒါဟာအထူးသ !! Xxx ။
ငါလာမယ့်တနင်္လာနေ့ချယ်လ်ဆီးအတွက် Made ခုနှစ်တွင်အလွန်အထူးဇာတ်လမ်းတွဲကြောင်းအတည်ပြုအလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် !! ချယ်လ်ဆီးအတွက်လုပ် .. မင်္ဂလာဆောင် !! ငါတို့အားလုံးကိုအရာအားလုံးကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်။ ဒါဟာအထူးသ !! Xxx @ E4Tweets @ E4Chelsea
- Ollie Locke (@ollielocke) ဒီဇင်ဘာလ 7, 2020
ပြီးခဲ့သည့်လကစတင်မှာ Ollie နှင့် Gareth တို့သည်ထိုထုံးကိုလျှို့ဝှက်စွာချည်နှောင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗြိတိန်တွင်ပိတ်ဆို့မှုများကိုဒုတိယအကြိမ်ပိတ်ပင်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကလန်ဒန်တွင်ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအခမ်းအနားကိုရှေ့ဆက်တိုးမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သောနေဆဲလည်းမရှိသောကြောင့်ပြပွဲဖုံးလွှမ်းအရာအားလုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ အများကြီး တက်ခြုံရန်ဒရာမာ၏။ Paris နှင့် Verity တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ Emily, Habbs နှင့် Harvey တို့အကြားဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပfeိပက္ခများဖြစ်ပွားနေသည်။ Tristan နှင့် Olivia တို့ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်နေပြီးလူတိုင်းကအဖြေလိုချင်သောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ - Sam နှင့် Zara အတူတူပြန်နေကြပြီလားသို့မဟုတ် ဘာလဲ?!
Made in Chelsea: The the Wedding မင်္ဂလာပွဲမှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုပါ
တနင်္လာနေ့ညနေ ၉ နာရီ @ E4Tweets #MadeInChelsea pic.twitter.com/HZN8b3tWPe
- ချယ်လ်ဆီးတွင် (@ E4Chelsea) ဒီဇင်ဘာလ 7, 2020
ချယ်လ်ဆီးအတွက်လုပ်: အဆိုပါမင်္ဂလာဆောင်9pm မှာလာမယ့်တနင်္လာနေ့ (14) လာမယ့်တနင်္လာနေ့ E4 ရက်နေ့တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
•ဉာဏ်စမ်းပဟေtheseိ - ဒီပျော်စရာကောင်းတဲ့ဂူးဂဲလ်သုံးသပ်ချက်များအကြောင်းအဖြစ်မှန်တီဗွီအစီအစဉ်ကိုခန့်မှန်းနိုင်သလား။
• LinkedIn တွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ 'သရုပ်ဆောင်များ' ဟုခေါ်သော MIC သရုပ်ဆောင်အချို့အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ပါသလား။